शरीरमा यस्ता लक्षण देखिन्छन् ? साबधान ! एड्स लागेको हुनसक्छ - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»शरीरमा यस्ता लक्षण देखिन्छन् ? साबधान ! एड्स लागेको हुनसक्छ
शरीरमा यस्ता लक्षण देखिन्छन् ? साबधान ! एड्स लागेको हुनसक्छ
By रिता घिसिंग on २९ पुष २०७४, शनिबार ०६:५७ स्वास्थ्य/जीवनशैली
अहिले विश्वकै मानिसहरु गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रसित छन् । त्यसमध्येको एक हो, एचआईभी एड्स । हाम्रो देशमा पनि यस्ता धेरै व्यक्ति छन्, जो एचआईभी एड्सबाट पीडित छन् ।
यो रोग असुरक्षित यौन सम्पर्क, दूषित रगत, प्रयोग गरिएका सुई (इन्जेक्सन)बाट सर्छ । सुरक्षित यौन सम्पर्कले केही हदसम्म एचआईभी सर्ने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । यद्यपि मानिसहरुलाई यसप्रति जागरुक गराउन सके यसलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
एचआईभीको सुरुवाती चरणमा यो रोग लागेको थाहा हुँदैन । तर उपचारमा धेरे ढिलाइ हुँदा व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्छ । त्यसकारण एआईभी लागेको बारे यसको सुरुवाती चरणमै थाहा पाउनसके उपचार गरेर पनि धेरै वर्षसम्म स्वस्थ भएर बाँच्न सकिन्छ ।
यसका लागि शरीरमा देखिने केही लक्षण चिन्नु जरुरी हुन्छ । हामीले यो आलेखमा एचआईभीको सुरुवाती चरणमा शरीरमा देखिने पाँच लक्षणबारे उल्लेख गरेका छौं । ति लक्षणहरु यस्ता छन्,